Wasiirka waxbarashada oo magacaabid sameeyay | Star FM
Home Wararka Kenya Wasiirka waxbarashada oo magacaabid sameeyay
Wasiirka waxbarashada oo magacaabid sameeyay
Wasiirka wasaaradda tacliinta ee dalka Prof. George Magoha ayaa Agnes Wahome u magacaabay madaxa waaxda qaabilsan nidaaminta qaabka ay ardayda ugu biiraan jaamacadaha iyo machadyada wadanka ee loo yaqaano (KUCCPS).
Tani ayaa timid ka dib markii guddiga maamulo waaxdan uu bishii hore sameeyay geeddisocod shaqaaleysiin oo si weyn loogu tartamay.
Mrs. Wahome ayaa si ku meel gaar ah u ahayd madaxa fulinta ee (KUCCPS) laga soo billaabo bishii 11-aad ee sanadkii hore xilligaas oo uu howlgab noqday John Muraguri oo jagadaas hayay.
Haweeneydan ayaa waaxda hadda loo xilsaaray in ay hoggaamiso ku soo biirtay sanadkii 2018-kii xilligaas oo ay qaabilsanayd maareynta howlaha tacliinta iyo cilmi baarista.
Next articleCiidanka xoogga dalka Soomaaliya oo rag iyo hub Shabaab ka qabsaday